Asal iyo taariikhda wax - Afrikhepri Fondation
Jimco, Agoosto 14, 2020
Asalka iyo taariikhda caanaha
11 daqiiqo akhri
Warshadaha Wax Soo Saarka Afrika
Le wax sidoo kale loo yaqaan "dhar Afrikaan ah" waa maro suuf daabacan oo tayo sare leh oo loo adeegsado samaynta dharka caanka ah. Asal ahaantiisu waxay ku beegan tahay wakhtigii ay yimaadeen yurubiyadii ugu horreeyay Galbeedka Afrika.
Ninka Dutch, oo xiriir ganacsi la leh Indonesia tan iyo 1602, wuxuu Malacca u geeyaa Portuguese ee 1641.
Laga soo bilaabo 1663 ilaa 1674, waxay degaan Sumatra, Macassar, Java oo ah dagaalyahanada xigta oo wiiqay sultanates.
1799, Holland waxay leedahay dhowr degmo oo Indonesia ah.
Qarnigii sagaal iyo tobanaad, kacdoonkii kacdoonkii dhacay, ayaa go'aansaday Dutch-ka in uu qoro oo uu tababaro mercenaries ku yaala xeebta Galbeedka Afrika halkaas oo ay horey u lahaayeen qaar ka mid ah ganacsiga. Tani waa sida raggii boqortooyada Ashanti, oo ku yaala xeebta Gold, oo hadda ah Ghana Waxay u baxeen inay u dagaallamaan Borneo iyo Sumatra. Ka dib markii ay adeegyo daacad u ah u shaqeeyeen loo shaqeeyayaashooda, waxay ku noqdeen galkooda waddankooda oo ay buuxsamaan Batikada quruxda badan ee Indonesia. Dumarkaasi waxay lahaayeen guul weyn oo ka mid ah aristiska iyo dhammaan dadka Ashanti. Dumarka Batik waxa ay si dhaqsi ah u heli doonaan qiimo isku mid ah sida dahabiga ah ee galbeedka Afrika iyo gaar ahaan "Boqortooyada dahabka".
Dutch, oo ah ganacsato caqli-gal ah, waxay si deg deg ah u garwaaqsadeen faa'iidada ay ka soo qaadan karaan caloosha. Tusaale ahaan, Holland, waxay aasaaseen warshado, kuwaas oo ujeedadoodu ahayd inay daadadka galbeedka Afrika ay la socdaan pagaha oo lagu soo koobay qaabka indhawareerka indonesia iyo samaynta farsamada wax ka lumay. Muraayadahan waxaa lagu magacaabaa wax, taas oo macnaheedu yahay wax ku qoran Ingiriis. Dhuxulada wax lagu cuno ayaa dhawaan dhalatay. Dukaanlayda dharkaasi waxay ka muuqdaan meel kasta oo ku yaal magaalooyinka waaweyn ee Galbeedka Afrika. Fasalka haweenka qaniga ah ayaa dhashay. Togo waxaa loo yaqaan "Benz Moms" sababtoo ah waxay u safrayaan Mercedes-Benz oo raaxo leh oo badanaaba leh hudheelo badan oo ku yaal wadamo kala duwan oo Afrika ah. Ugu horreyn, haweenka oo dhan waxay u tegi doonaan Ghana si ay cunto u helaan. Kadibna dhowr sano ka dib, waxay bilaabeen inay si toos ah uga iibsadaan Dutchka.
Muraayadku ma aha maro kaliya dhar, laakiin qiimaha tixraaca, calaamad u ah aqoonsi bulsheed, calaamad la aqoonsan yahay oo la aqbalo oo dhan. dhacdooyinka Major nolosha, hawlgelinta, aroos, xaflad magacaabayo, xaqiijinta, waxbarashada xaflad qalin jabin, guurada of degtey oo ka mid ah adeegayaashan horeysay, aas, fasaxyada qaranka ... waxaa lagu calaamadeeyay by ah "exit" of model cusub oo waxaan si taxadar leh u ilaalineynaa tusaale ahaan alaabta xusuusta ah. Mid ka mid ah tusaalayaasha ayaa tilmaamaya wicitaanka 18 June 1940, mid kale, ku biiritaanka Dahomey (hadda Benin ) madaxbannaanida, dhammaan wadamada kale ee Galbeedka Afrika waxay isku afgarteen amar isku mid ah, welina mid kale, booqashada guud ee General de Gaulle ee Afrika. Ivory Coast , ayaa tusaale u soo qaadatay guushii kooxda kubada cagta Abidjan ee finalka koobka qaran ...
Marka la eego guusha weligiisba sii kordhaysa ee loincloths kuwan, dalal badan oo West Africa rakibi warshadaha wax ay caasimada ama ku dhow inay kula dagaalanto wax Holland. Waxaa la odhan jiray Dahomey SODATEX (Company qabriga maryo Dahomey) ayaa maanta noqday SOBETEX (Company Beninese of Dharka), in reer Ivory Coast ayaa ku baaqay UNIWAX, in reer Senegal  waxaa lagu magacaabaa SOTIBA SIMPAFRIC ... Arday badan oo dugsiyo sare ah waxay qaataan casharo sawir ah si ay u soo bandhigaan qaabab cusub oo loo sameeyo shirkadaha tayada leh. Dhalinyaradu waxay soo baxaan dhowr bilood.
Warshadda Benin waxay soo saartaa saddex sifo oo dhar ah: maad, xayawaan iyo shivi. Marka hore waxa ay leedahay tayada isku midka ah ee wax-soo-saarka Dutch sidoo kale waxaa lagu magacaabaa chigan. Midda labaad waa tayada dhexdhexaadka ah, ugu dambeyntii waa mid qaro weyn leh oo si fiican u dhaqdhaqaaqa maydhashada.
Côte d'Ivoire, UNIWAX waxay soo saartaa dhukayga iyo daabacaadda, dhar khafiif ah oo miro ah. Qiimaha ayaa ku kala duwan sida tayada dharka.
Cuntadu mar walba waxay leedahay midabo qurux badan. Waa dhar miisaan caadi ah. Isagu ma wadi karo. Waa raaxo in la xidho.
Dutch Wax "ubax hibiscus", abuurista qaabeeyaha Gisèle Gomez
magacyada kala duwan ayaa la siiyaa lagu daydo oo ka soo baxay oo dhan wareersan: "Waxaad u baxaan, waxaan u baxaan" on model this, waxaan arki shimbir uga buul oo kale diyaar u ah inuu isaga raaca, "Chilli baxo", qaabkani waa asal jaale ah caleemo; "Ninkeyga waa awoodaa", "cagtaydu Your cagta," "ubax hibiscus" "Marka haweenka noqotay nin idlaan," "Isha aan soo horjeeda," "Z'yeux arko, oo aan afkiisu wuxuu ku hadlaa" The ... haweenka sharaf leh ee ka socda Togo, Benin, Abidjan ... waxay ku tartamaan fikradda ah inay baabtiisaan qaabka ugu dambeeyay ee ay damacsanyihiin, iyo xurmayntu inay noqoto kan ugu horeeya ee u xiran.
Gabdho badan ayaa isku haysta shaqada. Kuwa ka mid ah waalidiinta si wanaagsan u shaqeeya waxay tagaan dugsiyada qashin ee Yurub. Ragga qaarkood waxay isku midka yihiin. Bandhigyo heer sare ah ayaa furan meel walba oo ka mid ah caasimadaha dalalka kala duwan ee Galbeedka Afrika. Stylists waa hal-abuur.
"Qorraxda Sun", "Six Stars", "Pink Diamond", "Mamiwata", "Emerald" ... waa naaneystayaal dumar ah. Dumarka weyn ee Cotonou iyo Lomé waxay leeyihiin lahjadoodooda. Dharka, mar uun soo iibsaday, waxaa si qarsoodi ah loo siiyaa kan ugu dambeeya kaas oo qasab ku ah in uu macmiilkiisa u soo bandhigo qaab cusub oo dhar ah. Haddii uusan jeclayn, waa inay soo bandhigaan dadka kale illaa ay ka dheregto. Haweenkani maaha kuwo ka walaacsan in la caayo kuwa aan caqli gal ahayn ee ku dadaalaya in ay ogaadaan in nooca ay xiranyihiin horay loo xiray iyaga.
Inkasta oo guulo badani ka soo gaartay, ayaa waxoogaa hoos u dhac ku yimid siddeedda sano.
Jeans iyo T-shirts "laga sameeyay Shiinaha" waxay bilaabeen inay soo galaan suuqyada West Africa. Waxoogaa yar, dhallinyarada iyo dadka waawaynba way ka jajaban yihiin muraayada wax lagu duubo, taas oo aad u qaali ah. Dhaqanka shisheeye wuxuu soo galaa suuqa inta badan sababtoo ah caqabadaha adeegga canshuurta.
Dharbaaxada dharka: Nooca Dutch
Warshaduhu way qulqulayaan laakiin ma xirna.
Waxay ahayd waqtigan in naqshadeeyaha Beninese oo ku yaala Côte d'Ivoire uu yeelan doono fikrad qurux badan: qaabka loo yaqaan 'redefine fashion'.
Ilaa iyo siddeedda sano, kaliya bulshada ajnabigaa ee Afrikaanka ahi waxay soo gashay wax ku saabsan Ivory Coast. Ivoriyaanka ayaa labisan sida dadka yurubiyaanka ah. Waa uun ka dib markii 1980 ah in Benin stylist loo yaqaan Gisèle Gomez ayaa bilaabi doonta moodada dharka iyada oo la abuurayo dhar badan oo dhar ah. Wararka ayaa ku faafaya dhammaan caasimadaha dalalka Galbeedka Afrika. Haweenka qaniga ah waxay si joogto ah u aadaan Abidjan si ay u helaan qaabka ugu dambeeyay. Ivoriyaanka ayaa sidoo kale isweydaarsaday maadada.
In bilaha ugu horreeya, bazin iyo super-bazin ka dhigi doonaa muuqaalkooda. Kuwani waa dhar cad oo leh ama aan lahayn naqshado. Marka ugu horeysa waa mid adag oo khafiif ah, tan labaadna waa mid aad u qallafsan. Dharka ku jira bazin ama super-bazin ayaa badanaa la duubaa.
In kasta oo horumar ugu dambeeyay, iyo craze ah dhaqanka miiraan mar suuf African gacanta-leh tolmo wanaagsan oo badisid ah (tissue halka shalash, caan ah oo leh Nigeria), wax dhawra loincloth ugu horeeyay ee meel xirto ee West Africa .
Maanta, maadadu waxay noqdeen dhar caadi ah oo ku yaal Galbeedka Afrika.
Waxaa hadda jira suuqa Afrika:
- Waxyaabaha Dutchka ah.
- Waxyaabaha Afrikaanka ah.
- Waxyaabaha Ingiriiska ah
warkiisii ​​wax ka shisheeya soohdimaha Africa, iyo maro tan waxaa keliya ma ay helin dhammaan dalalka Afrika, laakiin sidoo kale in Europe, gaar ahaan Barbès ee Paris, halkaas oo dukaamo dhowr bixiyaan daydo Yurub iyo Afrika.
Xilliga xagaaga, waxaan ku aragnaa magaalada Paris, qaar badan oo Yurubiyiin ah ayaa ku labisan dhar.
Cuntada: waa nooc ka mid ah shanta gobol ee galbeedka Afrika
 Ghana waa mid ka mid ah waddamada Ingiriisiga ku hadla ee Geeska Afrika. Aagagguna waa 238537 km2 iyo dadkeedu ka badan yihiin 19 734 000 degganayaasha. Waxaa xuddun u ah waqooyiga Burkina Faso, koonfurta Gacanka Guinea, dhanka bariga Togo iyo galbeedka Côte d'Ivoire. Accra, caasimadeeda waxay ku taal xeebta. Waa dhulkii ugu horreeyay ee madow Afrika ah oo helay xornimo madaxbanaan 6 March 1957. Ingiriisi (rasmi ahaan), gha, twi, ewé iyo fante ayaa badanaa la hadlaa. Cocoa waa badeecadeeda ugu horreysa. Ghana waxay sidoo kale dhoofisaa manganese, bauxite, dheeman, dahab iyo koronto.
 Togo ayaa xuddun u ah waqooyiga Burkina Faso oo ku taal koofurta Gacanka Guinea, oo ku taal bariga Benin iyo galbeedka Ghana. Meelkeeda waa 56785 km2. 4 657 000 Togolese waxay ku nool yihiin dhulka. Luqadaha ugu waaweyn waa: Faransiis (rasmi ah), Ewe iyo Kabyé. Lome, caasimaddeeda, waa magaalo weyn. Xornimada Togo waxay dib u eegaysaa 27 April 1960. Togo waxay dhoofisaa suuf, fosfate, saliid, koronto, marble iyo manganese.
 Jamhuuriyadda Benin (oo hore Dahomey ilaa 1975) ayaa madaxbannaan tan iyo 1er August 1960. Waxay leedahay aag 112 622 km2 iyo dad ka badan xNUMX 6 446 degganaan. Woqooyi waxaa ku yaal waqooyiga Niger iyo Burkina Faso, koonfurta xeebta Gacanka Benin, bariga Nigeria iyo galbeedka Togo. Cotonou waa caasimad dhaqaale iyo Porto-Novo, oo ah caasimadda maamulka. Benin, Faransiis (rasmi ah), Fon, Goun, Mina, Yoruba, Dendi iyo Bariba ayaa badanaa looga hadlaa. Waa dhul beeran oo muhiim ah. Wuxuu soo dhoofiyaa suuf. Khayraadka macdanta ee Benin waa: saliid, marble, dahab iyo nuuro.
 Jamhuuriyadda Ivory Coast waa dowlad madax banaan tan iyo 7 August 1960. Meelkeeda waa 322 462 km2 iyo dadkeedu ka badan tahay 16 349 000 degganaan. Waxaa la kumyadu xagga woqooyi by Mali iyo Burkina Faso, si ay u koonfureed by Gacanka Guinea, bari by Ghana iyo galbeed by Guinea iyo Liberia. Yamoussoukro, caasimadeeda waxay ku taal gudaha gudaha dalka. Luqadaha ugu waaweyn waa: Faransiis (rasmi ah), Agni-Baoulé, Dioula, Bété iyo Senufo. Ivory Coast waa iibiyaha Kookaha 1er ee adduunka. Waxay leedahay kaydka saliida, gaaska dabiiciga ah (aan la xidhin), dheeman, dahab iyo kaydka cadka ee birta, bauxite, nikkel iyo manganese.
 Senegal waxay xor u ahayd xornimadii 4 April 1960. Waxaa xuddun u ah waqooyiga Mauritania, koonfurta, Gini Bissau iyo Guinea, oo bari u ah Mali iyo galbeedka Atlantic Ocean. Meelkeeda waa 196 722 km2 iyo dadkeedu ka badan tahay 9 662 000 degganaan.
Faransiis (rasmi ah), Wolof, Peul-toucouleur, serer iyo diola waa luuqadaha ugu muhiimsan. Senegal waxay dhoofisaa kalluunka, lawska iyo fosfateate.
Boorsada Dharka Quruxda leh ee loo yaqaan 'PINOWU'
2 cusub oo ka yimid 5,99 €
Iibso 5,99 €
ilaa Ogoosto 13, 2020 4:29 pm
[ZERO WAGTE Production SACS] - Isticmaal kala duwan oo loogu talagalay bacaha gadaasha dib loo isticmaali karo, bacaha qashinka dabacsan, geedo yaryar ama dhir udgoon, kaydinta toy, bacaha bacda, bacaha xeebta. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu shaandheeyo bacaha yogurt, casiirka khudradda iyo caanaha lowska, sidoo kale ku habboon keydinta dahabka, qadaadiicda, taleefanka gacanta, waxyaabaha kale ee dharka lagu qurxiyo, nacnac iyo aroos, hadiyad Xisbi.
[REUSABLE & WASHABLE & CONVENIENT] - Boorsooyinkayaga muslinka waa kuwo la dhaqi karo! Bacdama ay bacdu ka samaysan yihiin suuf dabiici ah, waxaa ugu wanaagsan in lagu maydho biyo qabow oo ay ha qalalaan. Bacdaheena miraha iyo khudradda sidoo kale waa ku habboon yihiin in la keydiyo marka aan la isticmaaleyn. Ku dhaji cabbir fudud-laab-laab ah oo ku habboon qaadashada boorsadaada, boorsadaada ama lagu keydiyo isticmaalka ka dib.
[DURABLE IYO LIVEING]] - Boorsada dharka lagu sawirto ee moodada ah waxay kaydisaa alaabadaada si amaan ah, sheyga u adkaysiga badanna wuxuu ka dhigaa shandad wax lagu iibsado oo waara oo loo isticmaali karo. Waxaad jeclaan doontaa dareenka jilicsan ee dharka iyo xarkaha u adkaysta dammaanadda ee boorsada linenka ah ee linenka ah ayaa socon doonta cimri dhan.
[SAFE AND NO TOXIC] - Boorsada bakhaarka ayaa laga sameeyay 100% suuf qaali ah, taas oo ah mid aad u amaan ah oo aan sun lahayn; Xalka kaydinta ugu habboon ee alaabada cusub sida miro darayga ah iyo digirta kafee, nacnac, laws. Boorsooyinka suufka lagu neefsan karo ayaa alaabadaada sii dheereeya iyagoo u oggolaanaya wareegga hawo wanaagsan.
[GREAT PARTY FAVOR BAGS] - Rinjiyeyn oo qaabee bacaha loogu talagalay dhacdo ujeedo ah. Adeegsiga weyn sida boorsooyinka hadiyado ee Kirismaska, dhalashada, xafladaha arooska, si loo kaydiyo saacadaha, silsiladaha, baayacmushtarka, dugaagadaha, dhagaxyada, hadiyadaha, farshaxanka, dahabka, xirmooyinka, iwm. .
United Souls, oo ah astaan ​​maaliyadeed oo dabiici ah oo uu abuuray qof u dhashay dalka Ivory Coast